IZIZATHU EZILI-13 ZOKUBA KUTHENI IXESHA LOKUKHUTSHWA KWENETFLIX 3 | ISAMENTE, ITREYILA, IYELENQE- IRADIO TIMES - UMDLALO WEQONGA
Zinezizathu ezi-13 zokuba kutheni isizini yesi-3 ikhutshwe kwiNetflix? I-Cast, i-trailer kunye nabaphangi
Isilumkiso: Abaphangi bexesha elinye kunye nezimbini kunye nezalathiso zokuzibulala.
Umdlalo weqonga ophikisayo weNetflix 'Izizathu ezili-13 zokuba kutheni ubuyela kwisizini yesithathu.
Ukulandela isiphelo esimangalisayo se-cliffhanger yesizini ephelileyo, abalandeli bebekhwaza befuna ukwazi ukuba kuya kwenzeka ntoni kuClay Jensen (uDylan Minnette) nakwabo afunda nabo eLiberty High School kulandela ukudubula kwesikolo okungaphumelelanga.
Ngokukhutshwa kwetreyila entsha siyazi ukuba ixesha liza kugxila kwimfihlelo yokubulala njengoko [Umchithi] uyabulawa. Umboniso uphinde wahlaziyelwa ixesha lesine- kunye nelokugqibela. Nantsi yonke into ekufuneka uyazi malunga nezizathu ezili-13 zokuba kutheni ixesha lesithathu.
Ngaba kukho itreyila kwizizathu ezili-13 Kutheni isizini 3?
Ewe ungayibukela apha ngezantsi. INetflix iphinde ikhuphe ixesha lokuphindaphinda kuyo Ijelo le-YouTube kwabo bafuna ukubuyela kwisantya. Itreyila entsha, ekhutshwe ngo-Agasti, ityhila ukuba ixesha lesithathu liza kugxila kwimfihlakalo yokubulala emva kokubhubha kukaBryce, kwaye uClay Jensen ngoyena mrhanelwa uphambili…
Zinezizathu ezi-13 zokuba kutheni isizini yesi-3 ikhutshwe kwiNetflix?
INetflix iqinisekisile Izizathu ezili-13 zokuba kutheni ixesha lokukhutshwa kwexesha lesithathu li 23 Agasti , Oko kuthetha ukuba sifumana iziqendu ezitsha kungekudala kunokuba bekulindelwe.
Kwakusele kucingelwa ukuba isizini yesi-3 yayiza kukhutshwa kamva enyakeni emva kokuba umdlali weqonga uZach Prusack, oza kudlala indima encinci, ebhengeze ku-Twitter ukuba izokwehla ngo-Okthobha u-2019. Ixesha lokuqala kunye nelibini zisungulwe ngexesha lasentwasahlobo (ngo-Matshi 2017 kunye Meyi 2018 ngokwahlukeneyo).
Siyazi ngoku ukuba Izizathu ezili-13 zokuba kutheni uza kufumana isizini 4, kodwa iya kuba lixesha layo lokugqibela. INetflix ithi umboniso uza kufikelela kwisiphelo sendalo.
Imiba eyahlukileyo. Le yi # 13IzizathuKutheni Igumbi lababhali. Ukuxakeka emsebenzini kwiXesha lesi-3. pic.twitter.com/4KDE1tx458
-Izizathu ezili-13 zokuba kutheni (@ 13IzizathuKutheni) NgoSeptemba 18, 2018
Dibana nabalingisi beZizathu ezili-13 zokuba kutheni
Ngubani okhuphayo ngenxa yezizathu ezili-13 zokuba kutheni isizini yesi-3?
Abona baphambili babuyayo kubandakanya amalungu aqhelekileyo uMinnette (Udongwe), uJustin Prentice (uBryce Walker), uChristian Navarro (uTony Padilla), uAlisha Boe (uJessica Davis) noBrandon Flynn (uJustin Foley).
Umboniso ukwadlala iinkwenkwezi uChristian Navarro, Miles Heizer, Devin Druid, Ross Butler, Anne Winters, Steven Weber, Amy Hargreaves noGrace Saif.
UKatherine Langford, owayedlala uHannah Baker kuthotho lokuqala, waqinisekisa ngexesha lokuvela kukaJimmy Kimmel Live! ukuba isimilo sakhe sisongelwe. Inkwenkwezi ikwabelane ngeposi ku-Instagram efundeka ngolu hlobo: ‘Hana… ndiyakuthanda… kwaye ndiyakuyeka uhambe’ Ngawo la mazwi bendikwazi ukuwathetha kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo, kwaye ngoku ndingabelana nawe.
Ndiyathetha, umboniso uya kuhlala uyinxalenye ekhethekileyo yobomi bam, ke ukuba bafuna ukundibuyisa njenge zombie okanye enye into, waqhula xa uKimmel emcinezela ukuba uHana angaze abuye na.
UBrenda Strong (Unina kaBryce, uNora Walker) unyuselwe waya kuthotho rhoqo. Ukudibana naye nguTimothy Granaderos, naye okonyuselwe kuthotho oluqhelekileyo, odlala umxhaphazi wesikolo uMontgomery de la Cruz.
Ndiziva ndithobekile namhlanje ???????? https://t.co/gd2F0VfHWA
-Timothy Granaderos (@TGranaderos) NgoSeptemba 7, 2018
Izizathu ezili-13 Kutheni inkwenkwezi ithi uMonty uba ngumntu okhohlakeleyo emva kokusweleka kukaBryce kwisizini 3
Akukaziwa ukuba isizini yesithathu iza kubona nabalinganiswa abatsha bazisiwe - kwisizini edlulileyo babone ukufika kobuso obusixhenxe obutsha.
Yintoni eyenzekileyo ukuza kuthi ga ngoku kwiZizathu ezili-13 Kutheni?
Uthotho lwempikiswano kwasekuqaleni lwalusekwe kwinoveli yabantu abadala kaJay Asher, kodwa ukusukela kwixesha lesibini ukubheka phambili ibelibali lokuqala.
Ixesha lesithathu liya kuba li-whodunnit njengoko itreyila ityhila ukuba uBryce ubulewe. Abathandi bemidlalo bayakumkhumbula njengesiqhulo esidlwengule uHana noJessica kwisizini yokuqala kwaye babekwilingo lesibini.
Umlingisi wodongwe uDylan Minnette waqhula ngento eza kuza kuTwitter.
Ndiyazi ukuba andikaze ndi-tweet malunga nezizathu ezili-13 zokuba kutheni kodwa kufuneka nditsho ukuba ezinye zezi zibhalo zimbalwa zokugqibela zexesha lesi-3 zezona zibalaseleyo. kulungile yiyo yonke loo nto ????
-Dylan Minnette (@dylanminnette) NgoJanuwari 8, 2019
Ixesha lokuqala libonakalise izizathu ezili-13 - okanye endaweni yoko, abantu abali-13- ​​ezikhokelele ekufeni kwentombazana uHana ngokuzibulala. Isizathu ngasinye sibhalwe kuthotho lweekhasethi, kwaye silandela uClay, owayenomdla wothando lukaHana, njengoko emamela iikhasethi kwaye efunda ngobumnyama obuphantsi kweSikolo samaBanga aPhakamileyo saseLiberty.
Ixesha lesibini wabona uClay eqhubeka ekhathazwa ngumoya kaHanna, ngelixa kwenye indawo umama wakhe wathabatha uLiberty High wamsa enkundleni malunga nokuzibulala kukaHana, kwaye uBryce wazanywa ngokudlwengulwa kukaJessica kwaye ekugqibeleni wagwetywa iinyanga ezintathu zokuvavanywa.
Zaphelela phi izizathu ezili-13 zokuba kutheni ixesha lesibini liphele?
Kwisiphelo sokugqibela, umfundi okhathazekileyo uTyler Down (uDevin Druid) wahlaselwa ngokwesondo nguMontgomery kwelinye lawona manqaku 'abukrakra nanempikiswano, kwaye kwabonisa ukuba ngumqukumbelo wokugqibela kaTyler, owayeqokelela indawo yokugcina izixhobo zokulwa elungiselela ngokudubula kwesikolo.
Kumdlalo wokugqibela, wexesha elinzima ngaphandle kwesikolo, sabona uClay ekwazi ukuthetha noTyler ezantsi ekuphumezeni icebo lakhe elibulalayo: Ukuba ngenene ucinga ukuba oku kuyakutshintsha into ebunjiweyo kwaye kungabi yenye nje intlekele Abantu abadala bakhala iveki ze balibale… Ukuba ucinga ukuba oku kuyokwahluka, yenza into ekufuneka uyenzile.
UTony emva koko wagxotha uTyler emotweni yakhe, wamshiya uClay ngaphandle kwesikolo, ephethe umpu kaTyler njengokuba imihlaba yamapolisa yayisondela.
Isiphelo siveze ukuba uBryce ufumene isohlwayo seenyanga ezintathu emva kwetyala lakhe lokudlwengula. Ngelixa abalandeli babecinga ukuba wehle ngoku ngoku siyazi, enkosi kwitreyila, ukuba uBryce ubulewe. Ngubani owabulala uBryce Walker? ngowona mbuzo uphambili ngoku.
UHana wayengenguye yedwa. Utyelelo olupheleleyo lweYouTube.com/Netflix.
Iposi ekwabelwana ngalo ngu Izizathu ezili-13 zokuba kutheni (@ 13reasonswhy) ngoMeyi 8, 2018 ngo-7: 00 kusasa PDT
Zithini izizathu ezili-13 zokuba kutheni isizini yesi-3?
INetflix ikhuphe isishwankathelo esisemthethweni: Iinyanga ezisibhozo emva kokuthintela uTyler ekwenzeni isenzo esingenakucingwa eSpring Fling, Clay, Tony, Jessica, Alex, Justin noZach bafumane iindlela zokuthwala umthwalo wokufihla kunye ngelixa bencedisa uTyler ukuba abuyele kwimeko yesiqhelo. Kodwa xa emva komdlalo odlakazelayo wokubuyela ekhaya ufikelela esiphelweni ngokunyamalala komdlali webhola ekhatywayo, kwaye uClay uzibona ephantsi kweliso elibukhali lamapolisa, kuxhomekeke kumntu wangaphandle onobuqili ukuba akhokele iqela ngophando olusongela ukubeka elubala iimfihlo zabantu bonke. Izibonda ziphakanyisiwe njengemiphumo yezona zinto zicwangciswe kakuhle zinokutshintsha ubomi ngonaphakade.
Ixesha lonyaka liza kubonisa kwakhona ukuthweswa izidanga eziphambili.
Kwenzeka ntoni ngoku? Ixesha lesithathu le # 13IzizathuKutheni iyeza. pic.twitter.com/B5brKfPGYZ
-Izizathu ezili-13 zokuba kutheni (@ 13IzizathuKutheni) Nge-6 kaJuni 2018
Izizathu ezili-13 zokuba kutheni impikiswano
Ekuqaleni kukaJulayi kulo nyaka, iNetflix yaqinisekisa ukuba ihlele i-13 Isizathu sokuba kutheni ukuzibulala emva kokubonisana neengcali. Xa umboniso ukhutshwa, bekukho impikiswano malunga nokuba ukulandelelana kubonise kakhulu.
INetflix ngoku ithe izimvo zolutsha zithathelwe ingqalelo kwaye baxelelwe ukuba sele iqalile ukugcinwa kwezihloko ezinzima ezifana nokudakumba nokuzibulala kwaye ikhuthaze abantu ukuba bafumane uncedo.
Isiteyitimenti sifundekile: Njengokuba silungiselela ukumilisela isizini yesithathu kamva ehlotyeni, besikhe sazi ngengxoxo eqhubekayo malunga nomboniso. Ke kwiingcebiso zeengcali zonyango, kubandakanya uGqirha uChristine Moutier, igosa lezonyango eliyintloko kwiAmerican Foundation for Suicide Prevention, sigqibe ekubeni nomdali uBrian Yorkey kunye nabavelisi bahlele indawo apho uHana athabatha ubomi bakhe kwixesha lokuqala .
UKatherine Langford njengoHannah Baker kwiZizathu ezili-13 zokuba kutheni isizini yokuqala (iNetflix, JG)
Umboniso wemizuzu emithathu ubude wawunqunyanyisiwe kuthetha ukuba ababukeli abasaboni mzuzu xa uHana ezibulala kwaye abazali bakhe bemfumene. Esi siqendu sikwavula ngesilumkiso sokuba isenokungafaneleki kubaphulaphuli abancinci kwaye sibandakanya imifanekiso ebonisa ubundlobongela nokuzibulala.
Isimo esitsha ngoku sibonisa uHana ezijonga esipilini ngaphambi kokuba asike abazali bakhe. INetflix ikwabeka iliso kuzo naziphi na iinguqulelo zepirate.
Ngomhla ka-Meyi, ingxelo yakhutshwa ibanga lokuzibulala kulutsha lonyukile emva kokukhutshwa kwexesha lokuqala. Olu phononongo luthi bekukho abantu abangama-200 abaswelekileyo ngokuzibulala kunokuba bekulindelwe kwisithuba seenyanga ezilithoba emva kokukhutshwa komboniso kunye nokusweleka kwabantu abaninzi ngokuzibulala ngo-Epreli kunakuqala naku-Epreli ngaphambili kwiminyaka esithoba. INetflix ithi ijonge kuphando ngelo xesha. Enye isifundo esenziwe yiYunivesithi yasePennslyvania Bathe abo babukele yonke le nkqubo kwaye babona isiphumo esibi sokufa babengekho semngciphekweni.
Umlingisi weMonty uTimothy Grenadiers uxelele RadioTimes.com ukuba ucinga ukuba isizini yesithathu ayizukuphikisana kunangaphambili, esithi ifana nomboniso owahlukileyo.
Ngokuqinisekileyo zikho iindawo zasendle kodwa andicingi ukuba uyakubuza ukuba ngaba kuya kubakho imiboniso eya kususwa kwisizini yesithathu, utshilo uGranaderos.
Izizathu ezili-13 zokuba kutheni ixesha lokuphononongwa kwesibini: yeyiphi iNetflix elungileyo - kwaye apho iziqendu ezitsha zonakala khona
Ziphi izizathu ezili-13 zokuba kutheni ixesha le-3 lifotwe?
Iposi ekwabelwana ngalo ngu Izizathu ezili-13 zokuba kutheni (@ 13reasonswhy) nge-Okt 19, 2018 e-11: 31 am PDT
Ngo-Epreli 2018, a ingxelo kwiphepha lasekhaya laseCalifornia iSonoma West Times kunye neendaba zathi ibhodi yeSithili saseWest Sonoma County Union ngo-Epreli 11 yavuma isivumelwano selayisensi sesithathu kunye neParamount Pictures evumela inkampani ukuba ifake imiboniso bhanyabhanya kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo iSebastopol - esiguqulela, sithetha ukuba Isikolo esinye esisetyenziselwa indawo yeSikolo samaBanga aPhakamileyo saseLiberty sivumile ukuqhubekeka nokufota kumabala aso.
Ukuba ungathanda ukuxoxa ngayo nayiphi na imiba ephakanyiswe kolu ngcelele, AmaSamariya ziyafumaneka ngeenxa zonke kwi-intanethi okanye ngefowuni ngenkxaso eluncedo, enobungane neyimfihlo.
owayenguJohn Stape kwisitalato sokuthweswa isithsaba
iistencils ezipholileyo zokusika
ukunkcenkceshela idragon fruit
gta v cheats uluhlu pc
pokemon diamond kunye neeperile remake